Sivavanye, umgca we-Gisèle Denis welanga | Amadoda aQinisekileyo
Sayivavanya, umgca we-Gisèle Denis welanga
Yiba neklasi | | Zokuthambisa, Ukunyamekela, yokuPhila
Kufanele ukuba sele sinescreen selanga engxoweni yethu yangasese, okanye nangaphezulu. Kodwa ukuba awukabinayo eyakho, okanye ufuna ukufumanisa ngezinye iindlela, bhala igama lika UGisele Denis. Siye sakwazi ukuvavanya ngokukodwa i-sunscreen, emva kwelanga kunye ne-lip balm.
Imveliso yeflegi kunye Ingcebiso epheleleyo sisikrini selanga. Yikhrimu leyo Inelona vumba lilungileyo kuzo zonke ezo langa endikhe ndakwazi ukuzizama, nangaphezulu kwezithambisi eziqhelekileyo. Intle kakhulu, ayicaphukisi kwaphela. Ukunyaniseka, kungcono ukuzama ukuba uyazi ukuba ndithetha ukuthini. Kodwa okuhle akupheleli apha, nge- ukufakwa ngokukhawuleza okukhulu kunye nokuthungwa okungafunekiyo, ilunge kakhulu kumadoda, iphela ifumana ingcebiso yam epheleleyo.
El emva kwelanga Yayisisipho ngelo xesha ndandingasixabisanga ngokomlinganiselo waso olungileyo. Ngelixa kuyinyani ukuba ivumba alikude nokuba lifane nelanga, ndingatsho nokuba khange lindenze ndiqiniseke, iipropathi zokuthambisa zamkelekile kunokuba zamkelekile. Ingaphezulu kokufezekisa umsebenzi wokuhambisa isikhumba emva kokuvezwa lilanga. Ishiya imvakalelo emnandi kakhulu yokuzola kunye ne-hydration. Ubume bayo obunamanzi banceda ukufunxwa ngokukhawuleza okukhulu.
Ekugqibeleni i ibalm yomlomo, mhlawumbi eyona ingaziwayo. Ngokomyalelo wosuku kwabo banengxaki yokubandezeleka, khumbula ukuba ilanga livelisa uxinzelelo lomzimba kwaye likhuthaza ukubonakala kweherpes. Oku ngokukodwa inemilo efanayo nelipstick (ayiyondoda kakhulu) kwaye kuyinyani ukuba ishiya imilebe ngethoni emhlophe, kodwa ifunxwe kwimizuzu embalwa ishiya ukhilimu ungaqondakali.
Malunga namaxabiso, Iscreen selanga i-SPF 30 ibiza ngaphezulu kancinci kune 27 euro kunye i-lip yamafutha ejikeleze i-euro ezintlanu. Emva kwelanga andazi kuba ibisisipho. Ixabiso elithile libiza ngaphezu kweempawu ezininzi, kodwa Ukunyuka kwamaxabiso kungaphezulu kokuthethelelwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Sayivavanya, umgca we-Gisèle Denis welanga
Rhea Ububele sitsho
I-aftersun iyamnandi, ngaphambi kokuba ndiyifumane khange ndicinge nokuya elwandle.
Kodwa ngoku kukumkhuphela ngaphandle kwaye ngengomso akusekho nomkhondo wokutsha
Phendula kuRhea Ububele
Zara okanye H & M? Uyakhetha
Ukuthambisa ulusu olubuthathaka: Nivea vs L'Oreal